Madaxweynaha Paraguay oo shaqada ka eryay wasiiro wax isdaba marin lagu eedeeyay - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Madaxweynaha Paraguay oo shaqada ka eryay wasiiro wax isdaba marin lagu eedeeyay
Muqdisho (Walwaal Online)- M/weynaha dalka Paraguay (Baragway) Mario Abdo Benítez ayaa shaqada ka cayriyay sadex wasiir oo xukuumadiisa ka tirsanaa si uu u dajiyo dibadbaxyo rabshado wata oo dalkaas ka socda maalintii Sadexaad.
War xafiiska m/weynaha kasoo baxay ayaa lagu sheegay in xilka laga qaaday wasiiradii wasaaradaha waxbarshada, arrimaha haweenka iyo daryeelka bulshada kadib markii lagu eedeeyay inay wax isdaba marin ku sameeyeen dawooyin loogu talo galay isbitaalada dalkaas iyo talaalka xanuunka covid 19
Jimcihiina waxaa is casilay wasiirkii caafimaadka dalkaas.
Dhamaan arrimahaan waxay imaanayaan ayadoo tan iyo jimcihii ay dadkii ugu badnaa iskugu soo baxeen wadooyinka magaalada caasimada u ah dalka Baragway Asanfiyoon kuwaasoo ka caraysan sida dawladu u maamushay xakamaynta xanuunka karoona oo dalkaas si daran uga jira.
Hawlwadeenada caafimada ayaa sheegay in isbitaalada ay kasii dhamaanayaan dawooyinka loogu talo galay in lasiiyo dadka qaba xanuunka karoona.
Dalka Baragway waxaa laga diwaan geliyay 165 kun oo kiis halka dadka xanuunka u geeriyoodayna ay 3 kun ka badan yihiin.
Previous articleShir Deg deg ah oo ay isugu imaanayaa Madaxda DF Iyo M/Goboleedyada Dalka.
Next articleGive Senate seat to Haji’s son, Garissa residents urged
Madaxweyne Laftagareen oo la kulmay Hay’adaha Amniga Koofur Galbeed
DFS oo maanta daah-furtay tallaal cusub